Waseda University - Kudzidza muJapan. EducationBro Magazine
inotangwa : 1882
Students (approx.) : 55000
Musakanganwa kuti kurukura Waseda University
Kunyoresa pana Waseda University
Waseda University akabata sezvo kwayo dzakavamba misimboti richengetedzwe rusununguko bhezari, kukurudzira kushandiswa chaikwo bhezari, uye anosimbisa kwevagari vomunyika vakanaka.
Wakabata rusununguko bhezari somunhu nechepakati musimboti, Waseda University chipikiranai kubatsira bhezari zvenyika kuburikidza maererano rusununguko kutsvakurudza sokukosha uye vagotevera pacharwo nguva dzose kuti kutsvakurudza yepakutanga.
Wakabata kushandiswa chaikwo bhezari somunhu nechepakati musimboti, Waseda University chipikiranai kupa mberi nguva nokutanga nzira kushandiswa hunobatsira bhezari uyewo kutevera yokungotaura tsvakurudzo nokuda vayo nokuda.
Wakabata anosimbisa vomuUmambo akanaka somunhu nechepakati musimboti, Waseda University chipikiranai kukudziridza vanhu hunhu vanogona kuremekedza munhu akazvimiririra, kukudziridza pachavo nemhuri dzavo, kubatsira rudzi uye nzanga, uye kushingaira munyika panguva huru.
Kushandurwa kuti nyika yose uye borderless kuri kuwedzera ose gore, unobata zvose chikamu kwenzanga, uye mumayunivhesiti vari kunze. Labels dzakadai mudzimba uye vatorwa varasikirwe zvazvinoreva, sezvo mumayunivhesiti rose vanotarisana kuramba kukwikwidzana mune Vachitsvaka chemhando-yedzidzo uye tsvakurudzo.
Kubva pakuvambwa kwayo, Waseda University kwave inonyatsoziva kuchinja munharaunda apo kuramba nheyo paro. Hatina vasingatyi vatora dzakasiyana-siyana nezvinetso uye nesimba vakateverera utsanzi. Waseda rave yakavakwa edu vamutangira zhinji uye kuedza kwavo akashinga embodying mweya dzakavamba. zvisinei, sezvo patinotarisana nguva iyi hombe kuchinja, Ini kuzviona sezvo basa uye zvakafanira ano Waseda kuenda mberi chivakwa pamusoro tsika iyi.
zvakaratidzwa yedu kutungamirira nedzidzo pose uye tsvakurudzo. The Mashoko Best Education, Best Research, Best Community, inomiririra kwedu mupurazi vavarira kuti vabudirire munyika-kirasi kunoguma zvinhu zvedu zvose. Ndinotenda kuti iye zvino ndiyo nguva yokuti mberi pamwe zvetsika enterprising mweya Waseda kuti kugadzirisa matambudziko akawanda munyika zvino anotarisana.
Ehe saizvozvo, kutora matambudziko pose kunoda kunyatsogadzirirwa, uye tinofanira kuvaka simba redu usati achikwakuka hombe.
Waseda muvambi Shigenobu Okuma akanzwisisa izvi, achiti "Kana uchida kubhururuka dzakakwirira, unofanira kudzidza zvakadzama,"Uye ndakanzwa ichi zvakananga mumazuva angu okutanga izwi sezvo mutungamiri mangwanani. Mana okupedzisira Makore zvechokwadi kudzidza ichigadzirira kubhururuka. Danho rokutanga Kunoumbwa zvinangwa zvikuru zvitatu:
1. Kuzoumba nechiono chakajeka uye waronga achikwakuka hombe
2. Kuvaka hurongwa framework tichishandisa mitemo yose
3. Zvigare nheyo mari zvakakodzera kukwikwidzana nevamwe masangano munyika-kirasi
The purani papurogiramu iyi ndiyo Waseda Vision 150 Strategic urongwa, izvo anomisawo zvinangwa uye abatsire kuti nguva kusvikira Waseda raMwari 150th gore iri 2032. In dzidzo bhora, isu kare chinozoiswa pazvikamu zvina hurongwa uye akasimbisa Global Education Center uye Center nokuda Yepamusoro Education Studies; vari pakutsvakurudza dzinayo isu makasimbisa URA (University Research Administrator) nzvimbo panguva Center for Research Strategy; mune mari, hatina kwakamutsa yepamusoro kwevari mipiro uye akabudisa noutano zvabuda zvemari uchitikurudzira.
Kuedza izvi zvave kuzivikanwa uye kwakatowedzera zvikuru mabhuku pedyo Waseda kuti kusarudzwa kuva pamusoro kirasi yunivhesiti iri National Super Global University Chirongwa. Pakati remarudzi kuitika rokuizarura kukwira mumayunivhesiti kunyika uye kusimbisa simba mafungiro, purogiramu inopa kwepamutemo nezvimwe rutsigiro chinangwa chedu kuzvikundira kumusoro 100 enyika yunivhesiti kuera uye kubereka 100,000 Vatungamiriri pose kwenguva yemakore gumi.
yunivhesiti yacho yose aishanda sechikwata kubudirira zvawanikwa aya padariro wokutanga basa redu. ikozvino, achitarira mberi, Ndakaisa panze anotevera mitemo kuti pachikuva maviri, aiming nokuti Waseda, zvakanakisa.
Zvinhu kuchinja kubva pamaonero dzomudzidzi
Huru vatambi ari kuyunivhesiti ayo vadzidzi, uye kukosha kwaro haanzverwi kunaka vadzidzi izvozvo anokudziridza uye anotuma munyika. Mumakore mana apfuura, takateerera vadzidzi vedu ndakatsunga zvinodiwa rokudzidzisa vanhu mari kuti inouya. Takatora marwadzo kushandisa kuchinja kubva pamaonero dzomudzidzi, kusanganisira kukura zvivako kukurukura nezveBhaibheri uye matambudziko makirasi, kuwedzera nechitarisiko mikana pakudzidza akadai mukutsinhana zvirongwa uye internships, uye overhaul wedu bhezari hurongwa. vadzidzi vedu uye kudzidza, kusanganisira vadzidzi dzakawanda, ndiyo racho netepimezha chatinozivikanwa kuyera kubudirira kwe "Best,"Uye saizvozvo hofori achikwakuka zvatinoita mumakore anouya achapiwa rinosundwa zvirongwa nokuda kwedu vadzidzi.
Kusununguka pamwe pagungano, kuita matambudziko matsva
The mberi Mafungiro vakambundirana kubudikidza Waseda kunoreva Vakazopinda kuti chinzvimbo kwakabva asi mukupfuura gungano mukuru dzokumusoro. Kuti mafungiro achava zvikuru inokosha riwedzere pakubudiririsa nyika-kirasi Waseda yatiri kufungidzira.
chikoro uye kutsvakurudza sangano neimwe kwakasimbiswa itsva mhinduro kuna nezvemaitiro kwenyika dzepasi pose uye interdisciplinary kudzidza. dhipatimendi redu uye mudonzvo uyewo zvakabudisa echimurenga tsvakurudzo pfungwa, groundbreaking kugutsikana inodzidzisa uye nzira, uye pfungwa itsva nokuda zvechechi utariri. A nokuzvidira uye kufarira achitamburira matambudziko zvinokosha kuti vavariro yedu "Waseda, Zvakanakisisa. "Tose tinofanira mikana uye kushanda pamwe chete kuti vazadzise zvinangwa zvedu panguva yechipiri pachikuva.
Zvinoita kuti nyika kuburikidza tsvakurudzo Waseda raMwari, tsika uye mweya
mu 1913, sezvo chikamu chacho Mission yakataurwa Shigenobu Okuma, Waseda University akazvipira 'pave mberi ruzivo ... nokurebesa zvayo simba uye basa kunyika takawanda. "Kwapera zana remakore, magetsi zera kunoda kuzivisa itsva kunyika. Sezvatinofungisisa vazoita avaizotarisana, tinofanira kuzodzosera kupara isu kuti vaone chepakutanga basa yeYunivhesiti.
sezvinei, Waseda University chinotsigirwa vadzidzisi vakawanda vane zvipo, alumni uye vadzidzi. Tiri nokuropafadzwa nhaka uye tsika anorimwa kubva 1882. Danho rechipiri achapiwa propelled kubudikidza nesimba nesimba kuwedzera zvinokwaniswa Waseda raMwari, kutungamirira munyika utsanzi, ane takashinga nemotokari kuti pave nenyika.
Zvichitevera roadmap ari Vision 150 urongwa, pamwe fakaroti, alumni uye vadzidzi kushanda pedyo pamwe kune Waseda, zvakanakisa, Ini ndiri zvirokwazvo kuti ichava yunivhesiti chatinogona zvose kutora zvakatowanda kudada.
Rokutenderwa Schools :
School of Political Science uye Economics
School of Culture, Media uye Society
Chikoro Chinokosha Science uye Engineering
School of Creative Science uye Engineering
School of Advanced Science uye Engineering
Graduate School Tsamba, Arts uye Sciences
Graduate School of chinobvumira Science uye Engineering
Graduate School of Creative Science uye Engineering
Graduate School of Advanced Science uye Engineering
Graduate School of Global Information uye Telecommunication Studies
Graduate School of Japanese Zvakarurama zvemutauro
Graduate School of Information, Production uye Systems
The Okuma Chikoro Public Management
Graduate School of Finance, Accounting uye Mutemo
Graduate School of Environment uye Energy Engineering
Graduate School of nhau
Yunivhesiti rakavakwa Samurai nyanzvi uye Meiji-nguva wezvematongerwe enyika uye aimbova mutungamiriri wehurumende Ōkuma Shigenobu muna 1882, ndokugamuchirwa zita yunivhesiti iri 1902. Zvakatangira sechinhu kukoreji chete madhipatimendi nhatu pasi yekare Japanese hurongwa dzidzo yepamusorosoro.
mu 1882, yunivhesiti akanga dhipatimendi nesayenzi enyika uye zvoupfumi, mutemo, uye mumuviri nesayenzi. Pamwe madhipatimendi izvi, imwe kosi Chirungu mutauro rakavambwa, apo vadzidzi vose madhipatimendi vaigona kudzidza Chirungu.
Papera makore matatu, wedhipatimendi muviri sayenzi yakavharwa nekuti yakange vamhan'ari zvishomanana. The dhipatimendi sayenzi uye okugadzira yakatangwa 1908.
The dhipatimendi mabhuku yakatangwa 1890.
Kunyange zvazvo Waseda pamutemo kushandisa izwi yunivhesiti racho rokuti mune 1902 hazvina kusvikira 1920 kuti, papi nevamwe zvikoro Japanese uye mumakoreji, makadirwa wevakadzidza Government yokuva yunivhesiti pasi chibvumirano University pakagadzwa murayiro.
The dhipatimendi dzidzo yakatangwa 1903, uye dhipatimendi yezvokutengeserana, mu 1904.
Zvakawanda zviri pazvivako yakaparadzwa nomoto kubhombiwa peTokyo muHondo Yenyika II, asi yunivhesiti yakavakwazve uye rakavhurwa ne 1949. Yakura kuva misoro yunivhesiti pamwe mukuru mukuru zvikoro zviviri uye chikoro ounyanzvi uye akitekicha.
In June 12, 1950, Makumi matanhatu mapurisa akavhiringidza Waseda University uye vakabata makopi tsamba yakazaruka muKomonisiti-akafuridzirwa General MacArthur. The tsamba yakazaruka kuna MacArthur aiva mumwe iverengwe pane muKomonisiti anotsigirwa dziite pavhiki yapfuura. Tsamba vakakumbira rugare chibvumirano nokuda Japan kuti zvaizosanganisira Russia uye yechiKomonisiti China, kurega maigara mauto, uye nokusunungurwa 8 Japanese kujeri pamusana Mukurwisa 5 Masoja U.S pane muKomonisiti dziite. Mumwe mupurisa akati misangano zvikuru pana Waseda kwaizoratidzwa rakarambidzwa ramangwana nokuti “vezvematongerwo” angaedza kushandisa navo. Yuichi Eshima, Mutevedzeri-sachigaro Students kuzvionera Society, vakati mapurisa chiito “stupified” vadzidzi uye mapurofesa, uye kuti “Uyu kupfuura prewar rugare ndichengetedze matanho.”
Unoda kurukura Waseda University ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo
Waseda University musi Map
Photos: Waseda University pamutemo Facebook
Waseda University wongororo
Join kukurukura pamusoro Waseda University.
Tokyo Medical uye Dental University Tokyo